2021 – Shwe Yaung Lan
September 27, 2021 SYL 0
ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသားက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ရာထူးခပ်ကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၊ သူဟာ အမြဲတမ်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံခြားကို မကြာခဏသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ နေ့တော်တော်များများမှာလည်း ညတိုင်းလိုလို ဧည့်ခံပွဲတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်တောင်ကျခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်မှာ ကျွန်မတို့မှာ သားလေးတစ်ယောက် ရလာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ၊ အမျိုးသားရဲ့ အလုပ်က အိမ်ထောင်ကျခါစထက် ပိုများလာပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အလုပ်အသစ်တစ်ခု ပြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက် အရင်ထက် အလုပ်ပိုရှုပ်လာပြီး မနက်တိုင်း ၇နာရီခွဲ […]
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခေါက်မှာဖော်ပြပေးချင်တကတော့၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုများစွာထဲမှာမှ သဘာဝနယ်လွန်လို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့ ထူးဆန်းသော မှိုပင်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးဆန်းပုံကတော့ လူသေကို မြှုပ်နှံထားတဲ့ နေရာမှာ ပေါက်ရောက်လာတဲ့ ၊ မှိုပင်ဖြစ်ပြီး အခြားမှိုပင်တွေနဲ့ မတူပဲ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်က အတော်လေးကို ကွဲလွဲလှပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုတာကတော့ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံတွေကိုသာ ကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါ ပရိသတ်ကြီးရေ… ဒါ့အပြင် ထို မှိုကိုစားမိလိုက်ပါက ဦးနှောက်အတွင်းရှိ အာရုံကြောတွေကို ချို့ယွင်းသွားစေပြီး၊ စိတ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကာ မမြင်ရတဲ့ […]
မအောင်မြင်ခင်အချိန်က ကားဝပ်ရှော့မှာအလုပ်သမားဘဝကနေပြီးစခဲ့ရတဲ့…. အောင်မြင်ခြင်း နည်းလမ်းများကိုပြောပြလာသော အဆိုတော်မနော… ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ အဆိုတော် မနောရဲ့ လေးစားစရာ အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနောကသူ့ဘဝကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြံတွေ သူ့ရဲ့ page ကနေမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော် မနော ကတော့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး သမီးဖြစ်သူ မေကြေးမုံ ကလည်း အနုပညာလောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဖအေတူသမီးလေးမို့အသံလည်းအရမ်းကောင်းပြီး အခုဆိုမေကြေးမုံကိုအားပေးတဲ့သူတွေတောင် အများအပြားရှိနေပါပြီ။ မနောက အခုခေတ်လူငယ်တွေကို အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို […]
ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ပေါင်းတာပါ။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ငါးသလောက်ကို လိုသလိုတုံး။ ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးရင် ဆား၊ ဆနွင်း၊ ငံပြာရည်၊ သကြားထည့် ရှောက်သီးကို အရည်ညှစ်ပြီးထည့် နယ်ပြီးနှပ်ထားပါ။ ပေါင်းမမယ့် အိုးထဲမှာ ဇပလင်ကို အနေတော်ဖြတ်ထည့်ပြီး ဒါးပြားရိုက်ပြီးခင်းပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး ငါးလုံးကိုလည်း လေးစိတ် စိတ်ပြီးခင်း အဲ့အပေါ်ကနေမှ ငါးတွေကိုနေရာချ။ ရေ နည်းနည်းထည့်ပြီး ပေါင်းပါတယ်။ ရေခမ်းရင်တော့ ငါးမြုတ်ရုံ ထည့်ပေးပါတယ်။ ရေထည့်တဲ့အခါ ငါးအပေါ်ကို လောင်းမထည့်ပါနဲ့။ ဘေးကနေ ညင်ညင်သာသာ လောင်းထည့်ပေးပါ။ […]
အချစ်မှာ အသက်အရွယ် ဆိုတာမရှိဘူး ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ချစ်ရင် ပြီးတာပဲ လို့ ဆိုကြတယ် ။ တကယ်တမ်း ချစ်လို့ တွဲပြီ ဆိုတော့မှ ပြဿနာက စတာ။ တစ်ခုပြီး တစ်ခု နဲ့ မဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အသက်ခြင်း တအား ကွာနေပြီ ဆို ဘဝဖြတ်သန်းတာခြင်းလည်း မတူတော့ပါဘူး။ အမြင်နဲ့ ခံယူချက် တွေကလည်း ကွာ ကြတယ် ။ ဒီဒုက္ခ […]
September 26, 2021 SYL 0
အဝေးမှာရှိတဲ့သင့်ချစ်သူ ဖောက်ပြန်နေကြောင်း သေချာနေပြီဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာ (၃) ခု…. Long distance relationship ဆိုတဲ့ relationship မျိုးဟာ တကယ်တမ်းတော့ မြဲဖို့သိပ်ကို ခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း မတွေ့ရဘဲ ဖုန်းထဲကတစ်ဆင့် အသံလေးပဲကြား၊ ရုပ်ကလေးပဲမြင်ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးဆိုတော့၊ LDRS တွေကြားထဲ ယုံကြည်မှုတွေ၊ နားလည်မှုတွေဟာ သာမန်အတွဲတွေထက် အများကြီးပိုလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေအစိုးရိမ်ဆုံးကတော့ အနေနီးတဲ့လူအပေါ် စိတ်ယိုင်သွားမှာကိုပါပဲ။ ဒီတော့ သင့်ရဲ့ အဝေးရောက်ချစ်သူဟာ ဖေက်ပြန်နေပြီလားဆိုတာ ဒီအချက် […]
ကျွန်မတို့တွေဟာ ကိုယ်နဲ့ခင်နေတဲ့ သူတွေအပေါ် အလွန်အမင်း ယုံကြည်တတ် ကြတဲ့ စိတ်လေးရှိ ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတော့ သူကတော့ ငါ့ကိုမကောင်းကြံမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူကတော့ ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကြည်စိတ်လေးပေါ့။ သဒ္ဒါလွန်တော့ ကျွန်ဖြစ်ဆိုသလို ယုံကြည်မှု လွန်ကဲတဲ့ အခါ ဒုက္ခရောက် ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အယုံလွန်ပြီး ဒုက္ခမရောက်ရအောင် ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှဖွင့် မပြောပါနဲ့။ အတိတ်ကအမှားလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း….. အတိတ်က အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လျှောက်မပြောပြ ပါနဲ့။ […]
တရုတ်ပြည်မှ တင်သွင်းသော ငါးသေတ္တာဘူးများတွင် သံကောင်များပါဝင်နေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ….. ငါးသေတ္တာဘူးတွေဟာ နိုင်ငံတကာက စူပါမားကတ်တွေ မီနီမားကတ်တွေအတွက်တော့ အရောင်းရဆုံး မရှိမဖြစ် စားသောက်ကုန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ ဝယ်ယူကြတယ်ဆိုတာ တကယ်လည်း ငါးသေတ္တာဘူးတွေရဲ့ အသုံးဝင်မှုတွေက များပြားလွန်းလို့ပါ။ အလွယ်တကူ ပြန်ချက်စားဖို့သာမက ဆန်းဒွစ်ရှ်တွေ၊ အသီးအရွက်ကြော်တွေနဲ့ ထမင်းကြော်တွေထဲအထိ ထည့်ကြော်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုးနည်းပြီး ၊ အချိန်ကုန်သက်သာလို့အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါးသေတ္တာဘူးတွေကို များသောအားဖြင့်တော့ ကုန်ကြမ်းရော လုပ်သားအင်အားပေါတဲ့ တရုတ်ဘက်ကနေ ထုတ်တာများပါတယ်။ […]
September 26, 2021 K K 0
စာဖတ်သူပရိသတ်တို့အနေနဲ့ ဘဝမှာ ထူးထူးခြားခြား တစ်ခြားသူတွေနဲ့မတူနဲ့ လူတွေကို မြင်ဖူးကြလား မသိဘူး။တခါတလေ သာမန်ထက် ထူးခြားတဲ့ လူတွေ ရှိတတ်တာ သဘာဝပဲ မဟုတ်လား။ဒီနေ့မှာတော့ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ လူတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် (၁)လက်ချောင်းတွေနဲ့ညီတဲ့ လက်မကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိူးသား (၂)မျက်လုံးအရောင် ၂ ခုရှိတဲ့သူ (၃)ပြားချပ်နေတဲ့ ခြေဖမိုးများရှိတဲ့သူ (၄)၇ လအရွယ်လေးနဲ့ ဆံပင်အထူကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကလေးလေး (၅)ဝေ့လည်နေတဲ့ ပါးသိုင်းမွှေး ပိုင်ဆိုင်ထားသူ (၆)စာရေးလို့ရတဲ့ […]